ဂန္ထဝင်ကြက်သားသုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့် artichoke သို့ကျဆင်းလာနှင့်အတူအဘယ်သို့စားရမည်နည်း
ပြင်သစ်ကြက်သွန်ဟင်းချိုနှင့်အတူအဘယ်အရာကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရန် entree ကဘာလဲ
အားလုံးနွေရာသီအသုပ်တစ် ဦး ဂန္ကြက်သားအသုပ် စာရွက်သည်ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ၊ အသားကင်၊ ရုံးရုံး၌အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ကိုသာအအေး၊ အသုပ်သုပ်အဖြစ်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်းကြက်သားသုပ်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်ထုပ်ရန်အတွက်ဖြည့်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးမိနစ်ဖိတ်ကြားချက်များလာသောအခါနောက်ဆုံးပေါ်မိနစ်သားညှပ်ပေါင်မုန့်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ တစ်ဘက်နှင့်အတူဒီနွေရာသီအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် အီတလီခေါက်ဆွဲသုပ် နှင့် crunchy အဆိုပါ cob အပေါ်ပြောင်းဖူး !
ကြက်သားသုပ်အတွက်ကြက်သားလုပ်နည်း ငါတစ်ခုခုသုံးရတာကြိုက်တယ် ကြက်ကြောင် ဒါမှမဟုတ် ကြက်သားရင်သားမီးဖုတ် ဒါမှမဟုတ် ပေါင် ။
သငျသညျစည်သွတ်ကြက်သားတစ် ဦး အဖြစ်တော့အတွက်သုံးနိုင်သည်ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်လျှင်လတ်ဆတ်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါကဂန္ထဝင်ကြက်သားသုပ်စာနည်းနည်းလေးဖြစ်လို့အပိုထပ်ထည့်တာတွေလုပ်ထားတယ်။ အကြပ်အတည်းအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အရသာအတွက်ကြက်သွန်အစိမ်း။
စပျစ်သီး၊ ထောပတ်သီးသို့မဟုတ် cranberries ခြောက်တို့ဖြင့်ကြက်သားသုပ်ကြိုက်သည်။ Pecans သို့မဟုတ်ဗာဒံသီးသည်ဤစာရွက်နှင့်ကောင်းစွာဆက်စပ်သည်။
သငျသညျဖန်တီးမှုရနှင့်အဘို့အ Mayo အချို့ကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ် မွေးမြူရေးခြံတစ်သင်းလုံးကကစားသမား သို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးသုပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားစာရွက်။
ဖန်တီးပါ ထောပတ်သီးကြက်သားသုပ် အချို့သောမုတ်ဆိတ်ရိတ်များကိုထောပတ်ထောပတ်သီးဖြင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရောမွှေပါ တစ်ပန်းကန်ထဲမှာ (အောက်ကစာရွက်နှုန်းဖြင့်) ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်သင်းလုံးကကစားသမား။ ကြက်သားနှင့်ဆုပ်။
အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် လိပ်ပေါ်, ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်ဆလတ်တစ်ပုတီးကျော်။
ဒီကြက်သားသုပ်အသားညှပ်ပေါင်မုစာအတွက်ဘယ်မုန့်ကိုမဆိုလုပ်လိမ့်မယ်၊ ဤသည်သဘာဝအနိမ့်ကာဗွန်သည်နှင့်တစ် ဦး ကျော်အကြီးပါပဲ ပစ်ချသုပ် အဖြစ်ကောင်းစွာ။
ရေခဲသေတ္တာ: လေလုံသည့်ကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်ကြက်သားသုပ်သည်တစ်ပတ်ခန့်ကြာအောင်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ကြာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေပြီးဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း (သို့မဟုတ် Dijon မုန်ညင်းအပိုအရုပ်) ဖြင့်အရသာကိုလန်းဆန်းစေပြီးအစေခံပါ။
ရေခဲသေတ္တာ ကြက်သားသုပ်ကောင်းကောင်းမအေးပါဘူး။ ရှေ့တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ကြက်သားကိုအအေးခံ။ အေးခဲပါ။ လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါအမြန်နေ့လယ်စာအတွက်အောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
အသားညှပ်ပေါင်မုန့် - ကြိုးစားကြည့်ပါ
စပျစ်သီးနှင့်နာနတ်သီးကြက်သားသုပ် - လတ်ဆတ်သောနွေရာသီအကြိုက်ဆုံး
အကောင်းဆုံးဥသုပ်စာရွက် - အားလုံး - အမေရိကန်ဂန္!
Avocado Ranch ကြက်သားသုပ်ထုပ် - အရသာနှင့်အတူတင်ဆောင်
ဘေကွန် Ranch ကြက်သားသုပ် - အရသာရှိတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့အရသာရှိတယ်။
ဂန္ထဝင်တူနာသုပ် - ၁၀ မိနစ်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။
ပုစွန်သုပ် - အလွအလင်းentreé
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ဂန္ထဝင်ကြက်သားအသုပ်စာရွက်သည်ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ၊ အသားကင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ရုံးသုံးအိုးခြမ်းတွင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ကိုသာအအေး၊ အသုပ်သုပ်အဖြစ်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်းကြက်သားသုပ်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်ထုပ်ရန်အတွက်ဖြည့်နိုင်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် ခွက် ချက်ပြုတ်ထားသောကြက်သား ကုန်တယ်
▢တစ်ခု အညှာဟင်းသီးဟင်းရွက် ကုန်တယ်
▢တစ်ခု ကြက်သွန်အစိမ်း diced (သို့မဟုတ် chives သို့မဟုတ်ကြက်သွန်နီ)
▢တစ်ခု လက်ဖက်ရည်ဇွန်း Dijon မုန်ညင်း
▢တစ်ခု လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လတ်ဆတ်တဲ့ဇီယာစေ့ မလုပ်မနေရ
သော့ချက်စာလုံးကြက်သားသုပ် သင်တန်းအသုပ် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။